Commercialize - IDGIP
IP Port စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် နည်းဗျူဟာအကြံပေးခြင်း
IDG မှ IP နှင့် ပတ်သက်သော အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကို ခေတ်မီ၍ထိရောက်သော နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြု၍ တစ်နေရာထဲ အပြီးအစီး ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှာ အောက်ပါ နယ်ပယ်တို့တွင် ထူးချွန်ပါသည်။
တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များခွဲခြမ်းလေ့လာခြင်းဆိုသည်မှာ တီထွင်ထားသောနည်းပညာများကို ၎င်းနည်းပညာနယ်ပယ် အတွင်း အတွင်းကျကျအသေးစိပ်နားလည်စေရန်လေ့လာပြီး ထိုတီထွင်မှုနည်းပညာ၏ ဆက်စပ်နည်းပညာများ နှင့် ဆင်တူနည်းပညာများကို ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းသာမက၊ အခြားသောနိုင်ငံများတွင်ရှိသော တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်များကို ပါလေ့လာသိရှိနားလည်စေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့လေ့လာခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို ဈေးကွက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်စီမံကိန်းဆွဲခြင်း နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်မြှင့်တင်ခြင်းတို့တွင်အလွန်အထောက် အကူဖြစ်စေပါသည်။
ဘာကြောင့် IDG မှ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ ခွဲခြမ်းလေ့လာခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကိုလိုအပ်ပါသလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသော အင်ဂျင်နီယာ၊ သိပ္ပံပညာရှင်၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအကြံပေး နှင့် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့ရှိသည်။ ထိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့မှ လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်သော အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို အကဲဖြတ်လေ့လာပြီးလူကြီးမင်းတို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဈေးကွက်အတွက်ရင်းနှီးရှာပ်နှံမှုစွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာခြင်း
ပညာ‌ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ နည်းပညာများကို ပိုမိုအကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန်အတွက် စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် နည်းပညာ လွှဲပြောင်းခြင်း
လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်း၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဥ်များကို ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြင့် ကာကွယ်ထားခြင်းမျှသာမကဘဲ ထိုမှတ်ပုံတင်ထားသော အသိဉာဏ်ပစ္စည်းများကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှသာ လုပ်ငန်းအတွက် အတိုင်းအဆမဲ့အကျိုးအမြတ်များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းများကို မှတ်ပုံတင်ထားပြီးနောက်ဘာဆက်လုပ်ရမည်ကိုသိပါသလား? လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းတွင် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ (intangible asset) ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုသိပါသလား? ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ လုပ်ငန်းစဥ်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် မူပိုင်ခွင့်များအားလုံးသည် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ထိုပစ္စည်းများသည် အိမ်နှင့်ကားတို့ကဲ့သို့ပင် အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးမပြုနိုင်ပါက အိမ်နှင့်ကားများကို အကျိုးမဲ့စွန့်ပစ်ထားခြင်းနှင့်တူပါသည်။ အချိန်ကြာပါကလည်း ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများသည် တန်ဖိုးလျော့နည်းသွားပြီး ၎င်းတို့ထံမှ အကျိုးအမြတ်များကိုမခံစားနိုင်ပဲ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
IDG သည် အာစီယံ၏ အဓိကဈေးကွက်သုံးခု ဖြစ်သော ထိုင်း၊ မြန်မာနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် စားသောက်ကုန်၊ဆေးဝါးပစ္စည်း၊ လူသုံးကုန်နှင့် အလှအပရေးရာဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်ရန် သင့်လျော်မှုရှိမရှိနှင့် လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကို လေ့လာ သုံးသပ်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဈေးကွက်လေ့လာမှုများအပြင် ထိုနိုင်ငံအသီးသီးရှိ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်း ထုပ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချပေးမည့် လုပ်ငန်းအကျိုးတူဆောင်ရွက်လိုသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မလုပ်ဆောင်မီ IDG ရှိရှေ့နေများမှ ဥပဒေအကြံပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ သ‌ဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အပြင် စာချုပ်ပါအချက်များအား တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမရှိကိုပါစစ်ဆေးပေး ပါသည်။
ဈေးကွက်အသစ်တွင်လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တို့သည် ထိရောက်သော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ IDG သည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အကြံပေး၀န်ဆောင်တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံတို့တွင် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် အတွက်ကူညီ‌ပေးနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင် နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်ချေများကို လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူ‌ပေးခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်မြင်စေရန်အကြံဥာဏ်ကောင်များရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ စားသုံးသူများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကို သင့်လျော်သောမိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များကိုရှာပေးခြင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာအကြံပေးမှုများကိုဆောင်ရွက်‌ပေး ခြင်းဖြင့်လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အောင်မြင်စေရန်အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။